Iimpawu zesailfish | Ngeentlanzi
Kulo nqaku yangaphambili sithumele kwi indlela ekhethekileyo abahamba ngayo Kwaye bazimanya njani xa bafuna ukuzingela, namhlanje siza kuqhubeka nokuthetha ngezi ntlanzi, ndikuxelele ukuba zeziphi iimpawu zazo eziphambili.
Ubunzima obukhulu bufikelela kwi-120 kilos. Banokuhlala kwiindawo apho ubushushu bujikeleze i-21 ukuya kwi-30 degrees. Kuqhelekile ukuyibona kwindawo yetropiki nakwindawo ezitshisayo. Ukusuka kwizibuko zihlala zibonwa ngaphezulu, ngokungathi yiseyile, iphume emanzini.
Yintlanzi etyiwayo etya kwintlanzi encinci ukuya kwiimbaleki eziluhlaza eziphakathi. Indlela yabo yokuphila ayaziwa kakuhle.
Enye yeempawu zayo ezingaqhelekanga lide lide kwaye liphezulu, Equkethe izinto ezingama-37 ukuya kuma-49. Isiphelo sayo sesibini sokugqibela sincinci kakhulu. Umlomo wayo mde kunalowo wefishfish.
Unobuchule bokulwa obukhulu kunye nokukwazi ukwenza i-aerobatics enkulu. Abo bafuna ukubabamba kufuneka basebenzise iindlela zokuloba zemidlalo ezinje ngokunyathela ngemitya yokuloba, i-mullet epheleleyo, iisampulu zeplastiki, iintsiba okanye amacephe kunye nezithiyelo eziphilayo.
Ziyabonakala kwiPacific (eCalifornia naseMexico) nakwiatropiki yeAtlantic (empuma yeIndiya) zolwandle. I-Pacificfishfish inokuba nobunzima obungaphezulu kweeponti ezingama-90 kwaye ubukhulu bayo bunokufikelela kwiimitha ezintathu.
I-Sailfish ithathwa njengeyona nto ifihliweyo yolwandle, ifikelela kwisantya seemitha ezingama-30 ngomzuzwana, oko kungathetha malunga neekhilomitha ezili-109 ngeyure. Esi santya sifezekiswa ngenxa yentsimbi enamandla kakhulu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Indlela i-seilfish edada ngayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Indlela swimfishfish ebhukuda ngayo (icandelo II)